Karius & Musiibo Maxaa Kala Haysta!! - Goolhayaha Baxsadka Ah Ee Liverpool Oo Markale Dhibaato Kala Kulmaya Reds - Gool24.Net
Karius & Musiibo Maxaa Kala Haysta!! – Goolhayaha Baxsadka Ah Ee Liverpool Oo Markale Dhibaato Kala Kulmaya Reds
20/05/2020 Apdihakem Omer Adem
Goolhayaha asal ahaan ka tirsan kooxda Liverpool balse dhawaanahan ka maqnaa ee Loris Karius ayaa dhexda kaga jira dhibaato cusub kaddib markii uu dhawaan soo kansalay heshiiskii uu kula joogay Besiktas oo mushahar siin weyday.
Waayaha ciyaareed ee goolhayaha ree Germany ayuu inta ka hadhay bedelay oo uu saameeyay kulankii Final-kii UEFA Champions League ee 2018 ay Reds guuldarrada kala kulmeen Real Madrid.
Laba qalad oo dilaah ah oo guuldarro ku sababay Liverpool oo uu kulankaas kasoo sameeyay ayaa ku qasbay kooxdaas inay bedesho iyadoo ciyaartaasi ay ahayd midii ugu dambaysay ee tartan ah ee uu matalo.
Kaddib markii uu heshiiska amaahda ah ugu wareegay dhinaca horyaalka Turkey-ga iyo kooxda Besiktas, Karius ayaan wax horumar ah samaynin isaga oo soo muujiyay qaab ciyaareedyo cajiib ah oo lagu daray qaladaad foolxumo ah.
Haddaba, iyadoo uu toddobaadyo kahor Karius soo kansalay heshiiskiisii Besiktas oo mushahar u siin weyday sababo la xidhiidha dhaqaale xumada uu keenay xanuunka Korona ayuusan sidoo kale haatan wanaag kala kulmayn Liverpool.
Dhibaatada uu ku mudanayo Anfield oo uu sheegay wargeyska ‘Liverpool Echo’ ayaa ah inaan xilli ciyaareedkan loo diiwaan gelin karin Liverpool oo uusan xataa wax tababar ah la samayn karin xiddigaha kooxdiisa.
Xiddigaha uu hoggaaminayo tababare Jurgen Klopp ayaa isku diyaarinaya soo laabashada xilli ciyaareedka iyagoo u baahan laba guulood oo horyaalka ah si ay hanashada Premier League u xaqiiqsadaan.